UKUKHUTHAZWA KWENHLANGANO EMNYAMA NGOLWESIHLANU
Sicela ufunde le Migomo Nemibandela ("Imigomo") ngokucophelela. Imigomo ebekwe ngezansi isebenza kubo bonke ababambiqhaza abangena kwi-Black Friday 5 Day Deal promotion (“Promotion”) eyenziwa yi-Judine Motors CC & Crause Pre Owned Vehicles CC ("Promotors"). Uma ungavumi ukuboshwa yiyo yonke imigomo, ngakho-ke sicela uyeke ukungena kuPhromoshini. Imiyalo yokuthi ungangena kanjani kuphromoshini nayo yonke imiklomelo iyingxenye yeMigomo. Ukubamba iqhaza kuphromoshini kuthathwa njengokwamukela kwakho iMigomo kanye nokwazisa amandla akho asemthethweni okungena kuPhromoshini. Okufakiwe okungahambisani nanoma yimiphi imigomo kuzoba okungavumelekile futhi kungabi namandla futhi kungasebenzi.
Umgqugquzeli unelungelo lokuchibiyela le migomo nemibandela nganoma yisiphi isikhathi ngesikhathi sokunyusa ngokuthumela izichibiyelo ezinjalo kumakhasi e-Facebook nakumawebhusayithi e-Judine Motors CC & Crause Pre Owned Vehicles CC.
Ukukhuthazwa kuvuleleke kubo bonke abahlali baseNingizimu Afrika nabanazo zonke izakhamizi zaseNingizimu Afrika ezineminyaka engaphezu kwengu-18 ezinelayisense / ilayisense yokushayela evumelekile, ngaphandle kwabaPhikisi Abakhishiwe (“Abafanelekayo Emincintiswaneni”).
Iphromoshini ayivulelekile kubaqondisi, amalungu, ophathina bebhizinisi, kanye nabasebenzi boPhromotha, nabathengisi bePromotor, abasebenzi bezinkampani zokukhangisa, abeluleki, abeluleki, izinkampani ezihambisanayo, kanye nomhlinzeki wanoma yiziphi izimpahla noma izinsizakalo ezihlobene nePhromoshini, (kufaka phakathi kepha kungagcini kuJudine Motors CC & Crause Pre Owned Vehicles CC kanye namalungu omndeni aseduze wabantu okukhulunywe ngabo (kufaka phakathi, kodwa kungagcini, kwabalingani, abalingani bempilo, abazali nezingane), kanye nanoma yimuphi omunye umuntu ilawulwa ngqo noma ngokungaqondile nguMgqugquzeli, kanye nezinkampani ezihambisanayo zamabhizinisi noma abantu ababalulwe kulesi sigaba sesi-2, kufaka phakathi izinkampani eziphethe kanye nezinkampani ezingaphansi, abasebenzi bazo, abenzeli, izinkampani ezingaphansi kwazo kanye nababonisi.
Ukukhuthazwa kuzoqala ngoLwesibili, 26 Novemba 2019 ngo-00h01 futhi kuzophela ngoMgqibelo, 30 Novemba ngo-24h00.
Noma ikuphi okufakiwe okutholwe ngaphandle kwesikhathi sephromoshini kuzothathwa njengokungekho emthethweni, kuzokhishwa ngokuzenzakalela, futhi ngeke kubhekwe.
I-E ntry Mechanism & Izimo Zokungena:
Ukuze uthole i-Free Tank kaPetrol noma i-Minor Service, umncintiswano ofanelekile kufanele:
Thenga ngempumelelo imoto kunoma yiliphi igatsha lePromoter elibambe iqhaza eliseBoksburg, eGauteng eNingizimu Afrika kungakapheli isikhathi sokunyuswa.
Ukuthengiselana kuphela okwenzeke ngesikhathi sephromoshini okuzoqinisekiswa. Imisebenzi engaphandle kwesikhathi sephromoshini yangomhla ka-26 - 30 Novemba 2019 izothathwa njengengavumelekile.
Abaqhudelana abafanelekile bazothola okukodwa kokulandelayo:
Ithangi eligcwele likaPhethiloli
Ivawusha Yezinsizakalo Ezincane Yemoto enenani eliphakeme lika-R1500
Ofanelekayo kuzodingeka anikeze ikhophi yeLayisense Yokushayela noma Yokufunda Kwabafundi njengoba kudingeka ngokoMthetho Wokuvikelwa Komthengi, wama-68 ka-2008 kanye nobufakazi bokuthengwa kwezimoto. Uma uWinile ehluleka ukunikeza imibhalo eceliwe kungakapheli amahora angama-48 (2) ngosuku eceliwe ukuthi enze njalo, uMnqobi uzolahlekelwa uMklomelo futhi ngeke abe nesicelo kuMphromotha.
Imiklomelo kungenzeka inganikezwa (futhi okufakiwe akuvumelekile) uma izinqubo zokungena noma le migomo nemibandela ingalandelwanga noma uma uMgqugquzeli ethola futhi / noma esola noma ikuphi ukungahambi kahle noma imikhuba yobuqili.
Uma nganoma yisiphi isizathu lokhu kukhushulwa kungakwazi ukusebenza njengoba kuhlelwe ngenxa yokutheleleka ngegciwane lekhompyutha, izimbungulu, ukuphazamisa, ukungenelela okungagunyaziwe, ukwehluleka kwezobuchwepheshe noma ezinye izimbangela ezonakalisa noma ezithinta ukuphathwa, ukuphepha, ubulungiswa, ubuqotho noma ukuziphatha okufanele kwalokhu Iphromoshini, umgqugquzeli ugcina ilungelo ngokubona kwakhe ukukhansela, ukunqamula, ukuguqula noma ukumisa okwesikhashana ukunyuselwa kuncike kunoma iziphi izinkomba ezibhaliwe ngaphansi komthetho osebenzayo. Umgqugquzeli ubuye agcine ilungelo ngokubona kwakhe ukuthi angavumela noma yimuphi umuntu uMgqugquzeli onesizathu sokukholelwa ukuthi wephule noma iyiphi yalezi zimo noma wenza noma ikuphi ukungaziphathi ngokungemthetho noma okunye okungafanele okubalwe ukufaka engozini ukuziphatha okulungile nokufanele kwePhromoshini. Amalungelo wephromoshini asemthethweni okuthola kabusha umonakalo noma esinye isinxephezelo esivela kumenzi wobubi lowo ayagcinwa.
Umgqugquzeli akanacala noma yiziphi izinkinga noma ukungasebenzi kahle kobuchwepheshe kwanoma iyiphi inethiwekhi yocingo noma olayini, amasistimu wekhompyutha on-line, amaseva, noma abahlinzeki, imishini yekhompyutha, isoftware, izinkinga zobuchwepheshe noma isiminyaminya se-traffic kwi-Intanethi noma kunoma iyiphi iwebhusayithi, noma iyiphi inhlanganisela kwalokho, kufaka phakathi noma yikuphi ukulimala noma ukulimala kwabahlanganyeli noma ikhompyutha yanoma yimuphi omunye umuntu ehlobene noma ebangelwa ukubamba iqhaza noma ukulayisha phansi noma iziphi izinto ezikule Phromoshini.
Uma kudingeka nguNgqongqoshe Wezohwebo Nezezimboni, iKhomishini Kazwelonke Yabathengi noma nganoma yisiphi esinye isizathu, siyoba nelungelo lokuqeda lokhu kukhushulwa ngokushesha ngaphandle kwesaziso sokuqedwa. Uma kunjalo, bonke ababhalisile ngalokhu banciphisa noma yimaphi amalungelo, okungenzeka ukuthi banabo ngokumelene nathi futhi ngalokhu bayavuma ukuthi ngeke babe nhlobo usizo noma isimangalo sanoma yiluphi uhlobo ngokumelene nathi.
Umgqugquzeli unelungelo lokususa noma yiluphi ulwazi olulayishwe ngumhlanganyeli lowo uMgqugquzeli, ngokubona kwakhe okuphelele, akholelwa ukuthi akukho emthethweni, kuyichilo, kuyacasula noma kuyalulaza, noma kwephula amalungelo empahla yomuntu wesithathu, noma kungenjalo akufanele umkhankaso yakhelwe ukuzijabulisa kwababukeli abaningi.
Umgqugquzeli ngeke abhekane nanoma ikuphi ukulahlekelwa noma ukulimala noma yini ethintekayo (kufaka phakathi kepha kungagcini ekulahlekelweni okungaqondile noma okulandelwayo) noma kunoma yikuphi ukulimala komuntu siqu okutholakale noma okwenziwe maqondana nokwenyuswa kanye noma nemiklomelo ngaphandle kwanoma yisiphi isikweletu, ngeke ukhishwe ngumthetho. Umgqugquzeli ngeke abe nesibopho sanoma yiluphi ulwazi olungalungile, olungelona iqiniso noma olungaphelele oludluliswa phakathi noma maqondana nalokhu kukhushulwa uma ukuntuleka kutholakala nganoma yisiphi isizathu esingaphandle kokulawulwa okunengqondo koMgqugquzeli, kufaka phakathi ngaphandle komkhawulo, ukungasebenzi kahle kwezobuchwepheshe noma ukwehluleka noma amawaranti (kufaka phakathi amawaranti nokusebenza kwemiklomelo).
Ukugcina Kwesinqumo Siphromoshini:
Izinqumo zikaPhromotha kuzo zonke izingqinamba ezimayelana nokuphromotha zizoba ngezokugcina, zibophe futhi akukho zincwadi ezizofakwa. Umgqugquzeli futhi unelungelo loku:
lungisa noma yimaphi amaphutha noma ukweqiwa maqondana nePhromoshini, kufaka phakathi noma yikuphi okushicilelwe; noma
ukumisa okwesikhashana noma ukunqamula Iphromoshini, ngesaziso esibhaliwe nganoma yisiphi isikhathi, futhi lokho kukhanselwa noma ukunqanyulwa kuzothathwa ngokuthi kuqale ukusebenza kusukela ngosuku lwesaziso leso.
Isinqumo sikaPhromotha sokungavunyelwa ukungena singekho futhi asizukubhalelwa zincwadi.
Ukusetshenziswa Kwemininingwane Eyimfihlo:
Umgqugquzeli uqoqa imininingwane ephathelene nabangenele (kufaka phakathi ubunikazi, imininingwane yokuxhumana kanye nekheli) ukuze athintane nabo mayelana nokuphakanyiswa futhi lapho kufanele khona, aqinisekise ubunikazi babo ukuze anikeze futhi alethe imiklomelo. Imininingwane yomuntu izophathwa ngokuya ngeSitatimende Sobumfihlo sePhromoshini esitholakala ku-h https: //www.judinemotors.co.za/Inqubomgomo yobumfihlo futhi ingasetshenziselwa ezinye izinhloso njengoba kubekiwe eSitatimendeni Sobumfihlo
Abaqhudelana abafanelekile bayavuma ukuthi amagama abo ashicilelwe kwabezindaba abalandelayo:
kumawebhusayithi we-Promotor okungukuthi https://www.judinemotors.co.za/ naku- https: //www.crausepreowned.co.za/
ngekhasi le-Facebook lePhromotha https://web.facebook.com/crausepreownvehicles/?_rdc=1&_rdr https://web.facebook.com/judinemotors/?_rdc=1&_rdr kanye namakhasi e-Instagram.
Ukubamba iqhaza Okuqhubekayo Kowinile:
Umgqugquzeli, ngemuva kokuthi kumenyezelwe uWinner esidlangalaleni, angacela ukuthi lowo Mnqobi avume ngokubhala noma ngenye indlela ukugunyaza, ukukhuphula kanye nokukhangisa izimpahla noma izinsizakalo zoMgqugquzeli, ngaphandle kwenkokhiso noma izindleko kuMnqobi. Uwinile futhi kungadingeka ukuthi abambe iqhaza emikhankasweni yokwazisa ngezinhloso zokusakaza noma zokushicilela futhi ngaleyo ndlela avume ukuthathwa kwezithombe zawo konke ukukhishwa kwabezindaba kanye / noma nemithombo yezokuxhumana.
Abawinile imiklomelo, ekwamukelweni kwemiklomelo, bangacelwa ukuthi bakhonjwe emphakathini, ekusakazweni noma ekushicilelweni ngokuxhumana kwangaphakathi noma kwangaphandle kukaCaltex kubandakanya nemithombo yezokuxhumana. Ngemuva kokuwina, amagama abo (igama lokuqala, isibongo sokugcina nedolobha ahlala kulo) angamenyezelwa ekhasini le-Facebook leCaltex. Abaphumelele ababamba iqhaza kunoma ikuphi ukukhangiswa ngeke babe nelungelo lokuthola noma iyiphi inkokhelo noma enye inkokhelo ngalokhu kwaziswa noma ngenye indlela.
Abahlanganyeli baqinisekisa ukuthi banamalungelo aphelele wokuqukethwe abakulayishayo nokuthi ukusetshenziswa kwalokhu okushiwo akusho ukwephulwa kwelungelo lobunikazi lomuntu wesithathu noma amanye amalungelo obunikazi bokusungula.
Ababambiqhaza bayavuma ukuthi ngokufaka "izithombe" zabo namazwana, banikeza imvume Kumgqugquzeli ukuthi asebenzise izithombe, ukuphawula noma iyiphi ingxenye yalokho, kunoma iyiphi nakubo bonke abezindaba ngezinjongo zebhizinisi lePhromotha, kufaka phakathi izinjongo zokuphromotha / zokumaketha ngaphandle kokucatshangelwa okufanele kukhokhwe ababambiqhaza. Imvume enjalo ihlala njalo futhi ayinakuguqulwa. Ababambiqhaza bayadedela futhi bavume ukubamba okungenabungozi uMgqugquzeli nabo bonke abasebenza ngegunya labo kunoma isiphi isikweletu sokusetshenziswa okunjalo nakwezinye izimangalo ezivela kulokho kusetshenziswa.
Izingosi zokuxhumana zihlanganisa kepha azikhawulelwanga, ku-Facebook, ku-Twitter, ku-Instagram, ku-YouTube, kokuqukethwe koqobo kufaka kodwa akukhawulelwe, noma yikuphi okuqukethwe okubhaliwe, ividiyo elalelwayo noma ebonakalayo noma iziqeshana zemisindo, izithombe, izithombe.
Uma ababambiqhaza befaka noma yiluphi ulwazi lomuntu siqu lwabantu besithathu kokuqukethwe abakufakayo noma olunye ulwazi olunikezwe Kumgqugquzeli ngezinhloso zePhromoshini, kumele bavunyelwe ngokomthetho ukuthi banikeze lolo lwazi futhi banikeze nemvume okukhulunywe ngayo esigabeni 14 maqondana nalokho imininingwane. Umbambiqhaza ngamunye uvikela uMgqugquzeli kunoma yikuphi ukulahlekelwa okutholakele noma izimangalo ezenziwe kumgqugquzeli ngenxa yokuthi umhlanganyeli akavunyelwe ngokomthetho ukuthi anikeze lolo lwazi noma anikeze umgqugquzeli imvume yokulusebenzisa.
Okuqukethwe okwenzelwe iphromoshini kungenzeka kungaze kulimaze noma yiliphi iqembu nganoma iyiphi indlela; umphakathi, abangenayo noma abagqugquzeli. Okuqukethwe okunjalo kuzosuswa futhi umdali avinjelwe kusayithi. Okuqukethwe okubonakala kwenza lokhu okulandelayo kuzosuswa kusayithi futhi umdali uzovinjelwa: okuqukethwe okubhekwa njengogaxekile, ukuqoqwa kolwazi lomuntu siqu, okuqukethwe okufeza injongo yezentengiso noma okuqukethwe okubhekwa njengokubi. Umgqugquzeli unelungelo lokususa noma yikuphi okuqukethwe okunjalo ngaphandle kwesixwayiso sangaphambilini. Umgqugquzeli unelungelo lokuhlulela lezi zingcezu zokuqukethwe futhi uzosebenzisa ukuqonda kwakhe ekunqumeni ukuthi ngabe bangaphandle kwemihlahlandlela ebekwe kule migomo nemibandela.
Bonke Abaqhudelani Abafanelekile nabawinile bavikela umgqugquzeli, abaqondisi bayo, abasebenzi, osonkontileka, ama-ejensi wokukhangisa, abeluleki, abahlinzeki nabenzeli kunoma yiziphi izingozi, ukulahleka, izimangalo noma ubunikazi obuvela ku:
ukusetshenziswa noma ukulahlwa komklomelo kubandakanya, kodwa kungagcini lapho, ingozi, ukulimala, ukulimala, noma ukulahlekelwa;
ukubamba kwabo iqhaza kuPhromoshini, kufaka phakathi noma yiziphi izindleko ezihambisana nalokho kubamba iqhaza;
noma ikuphi ukudluliswa okulandelayo noma ukushintshaniswa komklomelo; kanye / noma iv. noma ikuphi ukukhanselwa okusemthethweni noma ukunqanyulwa kwephromoshini noma ukulungiswa kwanoma yimaphi amaphutha noma ukushiyeka ngaphakathi kwesikhathi sePhromoshini.
Umthetho osebenzayo kanye negunya:
Abacwaningi mabhuku abazimele kanye / noma abameli bazokwengamela lokhu Kukhushulwa.
Imithetho yaseNingizimu Afrika isebenza kulokhu kukhushulwa ngaphandle komunye umthetho. Abangeneli baletha igunya eliphelele lezinkantolo zaseNingizimu Afrika.
Xhumana noMgqugquzeli: Uma unanoma yimiphi imibuzo, thintana nenombolo Yokuxhumana Yomgqugquzeli ku-011 826 2044 ngezikhathi zokusebenza: NgoMsombuluko kuya kuLwesihlanu, ngo-08h00 kuya ku-17h00.
* Ukuzikhulula: Ulwazi belulungile ngesikhathi sokushicilela kepha lungashintsha.